एकै कोखका ६ छोरी पीएचडी प्राप्त वैज्ञानिक: बने कोही अमेरिका, कोही अष्ट्रेलियाका सरकारी जागिरे
शनिवार ११ पुस, २०७७
१, डा. संगीता सिंह
जेठी छोरी संगीताले भौतिक विज्ञानमा पीएचडी गरेकी छन् । अहिले उनी जीवीएम कलेज, सोनीपतमा सहायक प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छिन् । उनले महाप्रयोग परियोजनामा ​​पनि योगदान दिइसकेकी छिन् । यस बाहेक, उनी अमेरिका र अष्ट्रेलियामा दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरूमा भाग लिन गइसकेकी छिन् । ति सम्मेलनहरुमा संगीताको शोध पत्रमा छलफल पनि गरिएको छ । संगीताको विवाह रितल गाउँका सुरेन्द्र सिंहसँग भएको छ । पति सुरेन्द्र आईएफएफकेओ टोकियोमा काम गर्दछन् ।
२, डा. मोनिका सिंह
माइली छोरी मोनिकाले जैविक विज्ञानमा पीएचडी गरेकी छिन् । हाल मोनिका सिंह क्यानाडाको टोरन्टो राजीव दादरी निवासी पति पवन सांगवानसँग स्पेयर पार्ट्सको व्यवसाय सम्हाल्छिन् । यस अघि उनी टोरन्टोमा सरकारी काममा अनुसन्धान गर्थिन् । उनले आफ्नो व्यवसायको लागि काम छोडेकी थिइन् ।
३, डा. कल्पना दहिया
साइली छोरी कल्पनाले गणित विषयमा पीएचडी गरेकी छिन् । हाल युआईटी चन्डीगढमा सरकारी प्रोफेसरको रूपमा अनुसन्धान गर्दै आएकी छिन् । क्यानाडा र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि उनको शोध पत्रमाथि छलफल गर्ने गरिएको छ । उनका पति डा. अनुज चन्डीगढको पञ्जाब विश्वविद्यालयमा कम्प्युटर प्रोफेसर छन् ।
४, डा. नीतू दहिया
काइली छोरी नीतू अमेरिकामा खाद्य एवं औषधि विभागमा काम गर्छिन् । उनी पति सीए राहुल बोहरासँगै वाशिङ्गटन डीसीमा बस्दै आएकी छिन् । सन् २००६ मा, उनले अमेरिकामा सरकारी जागिर पाएकी हुन् । उनका पति राहुल उदयपुर, राजस्थानका हुन् ।
५, डा. डेजी दहिया
जगदेवकी ठाँईली छोरी पनि गणित विषयमा पीएचडी धारक हुन् । फिल बार यूएसए वाशिङ्टन डीसीको इन्स्टीट्यूट अफ हेल्थमा खोजकर्ताको रुपमा काम गर्दै आएकी छिन् । तपाईंलाई जानकारी गराउ कि डेजी अझै अविवाहित छिन् ।
६, डा. रुचि दहिया
कान्छी छोरी रुचि दाहिया पनि ठूली दिदीबहिनीको पदमार्गमा छिन् । उनी अमेरिकाको एरिजोना राज्यमा अनुसन्धान गरिरहेकी छिन् । अविवाहित रुचिले पनि गणित विषयमा पीएचडी गरेकी छिन् ।
विदेशमा कसरी पुगे छोरीहरु
जगदेवका अनुसार मोनिका सिंह विवाह पछि आफ्नो पतिसँग क्यानडा गईन्, त्यहाँ उनलाई सरकारी जागिर मिल्यो । अन्य छोरीहरूले हरियाणामा बस्दा अनलाइन आवेदन दिएर सरकारी जागिर पाएका हुन् । जागिरपछि उनीहरु भारतबाट अमेरिका, क्यानडा सरेका हुन् । जगदेवलाई आफ्ना छोरीहरुमाथि गर्व छ । छोरीहरूको पढाई स्कूल कलेज पढ्दा देखि नै धेरै राम्रो थियो । मोनिका, कल्पना, नीतु, डेजी र रुचि दोस्रो स्थानमा आउँने गर्थे ।
जगदेव दहिया एक उत्कृष्ट शिक्षकको साथसाथै हरियाणाका एक चर्चित च्याउ खेती गर्ने व्यक्ति पनि हुन् । उनीहरूको दाबी छ कि हरियाणामा च्याउ खेती उनीहरूको पेशा हो । सन्‌ १९८० देखि जगदेवले हरियाणामा च्याउ खेती गर्न थालेका हुन् । हिमाचल प्रदेशको सोलनबाट च्याउ खेतीको प्रशिक्षण लिएर आएपछि हरियाणामा किसानहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिन थालेका छन् । उनी १९९२ देखि १९९८ सम्म भारतको च्याउ संस्थानका उपाध्यक्ष पनि रहेका थिए ।